(မိုးမခ) ဧပြီ ၂၊ ၂ဝ၁၈
ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ကျပ် ၁ဝ ဘီလီယံ မတည်ပြီး တည်ထောင်လိုက်ပါပြီ။ အစိုးရက စီးပွားရေးမလုပ်သင့်ပါဆိုတဲ့ အစိုးရဌာနများကို စိတ်ကုန်နေသူများအတွက် ခေါင်းထောင်ကြည့်စရာ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန် စည်ပင်ကို စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ ဥပဒေကို ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှာ မဆွေးနွေးခင်မှ ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
လူနဲ့မူ ဘယ်ဟာအရေးကြီးသလဲ ဆွေးနွေးကြသူများက လူကိုပဲပြောင်းလဲချင်ကြပါတယ်။ အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရ ၂ နှစ်သက်တမ်းမှာ ရင်ကြားစေ့စပ်နေရတာနဲ့ စီးပွားရေးမတိုးတက်လို့ စိတ်ပျက်နေချိန်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စီးပွားရေးကိုကိုင်တွယ်တော့မယ်သတင်းကြောင့် အားတက်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ များနဲ့ ဝန်ထမ်းများကိုစိတ်ပျက်နေချိန် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရတည်ထောင်လိုက်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ဘယ်သူတွေပါသလဲ ကြည့်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်များကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းလျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒေါ်နီလာ ကျော်ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး ဦးသိမ်းဝေက ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဖြစ်သည်။ ကျန်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်သုံးဦးမှာ တိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီး ဦးဟံထွန်းနှင့် လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာနှစ်ဦးအဖြစ် စင်ကာပူဝန်ကြီးဟောင်း ဂျော့ခ်ျ ယိုး George Yeo ၊ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိဟောင်း ဦးထွန်းမြတ်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ အံ့အားသင့်စရာ အားရဝမ်းသာစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ယခင်တင်ဒါအောင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီတွေမက အခြားကုမ္ပဏီများကိုလဲ လုပ်ခွင့်ပေးမယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်နီလာကျော်က ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကြည့်ရင် ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘတ်ဂျတ်မှာ နိုင်ငံတော်ရငွေပေါင်း ကျပ် ၁၆၆ဝ၅ ဘီလျံမှာ နိုင်ငံပိုင် အဖွဲ့ စီးပွားအစည်းများထည့်ဝင်ငွေက ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး အခွန်ကောက်ရငွေက ၃၉ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားအဖွဲ့အစည်းများက ပေးတဲ့အခွန်နဲ့ပေါင်းရင် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားအဖွဲ့အစည်းများက ဘတ်ဂျတ်ရဲ့ တဝက်ကျော်ပါဝင်နေပြီး ပုဂ္ဂလိက အခွန်များက ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းအောက်မှာပဲ ရှိပါတယ်။ တပ်မတော်ပိုင်တဲ့ ဦးပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့များကတော့ တပ်မတော်ဘတ် ဂျတ်ထဲမှာ ကြီးမားလာပါတယ်။ တပ်မတော်သားများအတွက် မိုးကျရွှေကိုယ်ဖြစ်စရာမလိုပဲ ဦးပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ အငြိမ်းစားယူချိန် လုပ်ကိုင်စေဖို့ ဦးပိုင်စီးပွားရေးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဦးပိုင်စီးပွားရေးလည်း နိုင်ငံပိုင်စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများလို လူတစ်စု လက်ဝါးကြီးအုပ်သလိုဖြစ်နေကြောင်း မီဒီယာများက ပြောနေကြပါတယ်။ အကြီးမားဆုံး အပြောခံလိုက်ရတာတော့ အသက် ၇၃ နှစ် အဖိုးအရွယ် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲမှာ ဆုရတဲ့ စန္တရားဦးတင်ဝင်းလှိုင်ရဲ့ မိုးကျရွှေ ကိုယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးက မြန်မာနိုင်ငံဝန်ကြီးဌာနအားလုံးက ဝန်ထမ်းများထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာ စကားပြောကြမ်းလို့ ပြန် ကြားရေးဌာနက ချက်ခြင်းပြန်ရှင်းနေရပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ငွေကြေးဘတ်ဂျတ်များကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲဖို့ဆိုတာ အဂတိများစွာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခေါင်မိုးကစပြီးလုံဖို့အတွက် ၂ဝ၁၆ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရနဲ့ တပ်မတော် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
အက်ဖ်အမ်အိုင်ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိမ်းဝေကို အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် CEO အဖြစ် ခန့်အပ်နိုင်ခြင်းကလည်း အလွန်အားရစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ ဒုတိအချက်က စင်ကာပူဝန်ကြီးဟောင်း ဂျော့ခ်ျယိုး George Yeo ကိုလည်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ၅ ဦးမှာ ပါဝင်အောင် ကြိုးစားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ Serge Pun @ ဦးသိမ်းဝေအကြောင်း အဓိကထားပြီး တင် ပြပါမယ်။
● အစိုးရရဲ့ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း (NYDC , New Yangon Development Company)
မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုဇုံ SEZ Special Economic Zone အဖြစ် ဗီယက်နမ် ဗွီအက်စ်အိုင်ပီ Vietnam က VSIP အထူးစက်မှုဇုံလိုမျိုး စကာင်္ပူအစိုးရ တိမားဆက် ရဲ့ Acendas Singbridge က ဦးသိန်းစိန်လက်ထက် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရလက်ထက်မှာ ရှောက် စန်းအုပ်စုက လက်ဦးပြီး ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို စတင်ခဲ့တယ်။ အဂတိများစွာကြောင့် အစိုးရသစ်တက်လာချိန် ကုမ္ပဏီ၎ ခုကိုပေါင်းလုပ်စေရင်း နောက်ဆုံး ဦးဖြိုးမင်းသိန်း အစိုးရတက်လာတော့ NYDC သေချာ စနစ်တကျ လေ့လာပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မြေတွေ ရော်ကြေးပေးတဲ့ ကိစ္စများ လုပ်ကြပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရဆီကို မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Singbridge ကိုခေါ်လာတာ သူကတော့ စင်ကာပူဝန်ကြီးဟောင်း ဂျော့ခ်ျယိုး George Yeo ယခု NYDC CEO ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျော့ခ်ျယိုးဟာ စင်ကာပူရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများစွာလေးစားတဲ့ ဝန်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို သံယောဇဉ်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုတာ မြန်မာ ၂ သိန်းလောက် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံလေးဖြစ်ပြီး၊ စင်ကာပူနိုင်ငံကို မြန်မာအစိုးရအဆက်ဆက် အလွန် နှစ်ခြိုက်ပါတယ်။ မြန်မာအုပ်ချုပ်သူများ၊ အတိုက်အခံများ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၊ သူဌေးများကအစ အခြေခံလူတန်းစားအထိ ပညာသင်၊ အလုပ်သွားလုပ်၊ ဆေးကု၊ ဈေးဝယ်၊ ငွေပိုနေရင် စင်ကာပူဘဏ်ကို ငွေပို့ထားကြပါတယ်။ အလွန်စိတ်ချရတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံက ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများမှာ အားကိုးရပေမဲ့ အဂတိနည်းပါးလှတဲ့ စင်ကာပူကို ပိုပြီးအားကျတာ မထူးဆန်းလှပါဘူး။ ဒါကြောင့် George Yeo ကို ပါဝင်လာအောင် ခေါ်နိုင်တာနဲ့၊ စီးပွားရေးမှာ အဂတိမရှိဘူး ကြေငြာရဲတဲ့ Serge Pun @ ဦးသိမ်းဝေကိုလဲ စီအီးအိုအကြီးအကဲဖြစ်ခေါ်လာနိုင်တာလဲ ထူးခြားချက်ပါ။ ဦးသိမ်းဝေက သူ့အောက်ကကုမ္ပဏီတွေကို NYDC မှာ လုံးဝမလုပ်စေဘူးလို့ပြောပါတယ်။ NYDC စီးပွားလုပ်ငန်းကို ပိုကောင်းအောင် လုပ် နိုင်မယ် ပိုသာအောင်လုပ်ပြမယ်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာလုပ်မယ်ဆိုထားတယ်။
Swiss Challange ကိုသူကစပြောတာ။ NYDCက project ကို တစုံတဦးနဲ့စလုပ်မယ် ညှိမယ် ဒါကို ချဲလင်းခေါ်မယ်၊ ဘယ်သူ ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ် ပိုသာအောင်လုပ်ပြမယ်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာလုပ်မယ်ဆိုထားတယ်။
ဒီစီမံကိန်းကို တရုတ် ဧရာမဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီး CCCC (China Communications Construction) က စိတ်ဝင် စားပြီး ဒီဇိုင်းတောင်ထုတ်ပြီးပြီ၊ ငွေလဲရင်းနှီးမယ်ဆိုပါတယ်။ ငွေလည်းရင်းမယ်၊ တခြား တရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားနေကြပြီး မူလပထမ စခဲ့တဲ့ ရှောက်စန်းအုပ်စု ကလည်း မြေတွေရထားပြီးပြီဆိုတော့ အင်နဲ့အားနဲ့ ပြိုင်ဆိုင်လာနိုင်ပါတယ်။
Ref: Jason Min Naing
● ဂျော့ခ်ျယိုး George Yeo
စင်ကာပူနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် လီကွမ်းယူလက်အောက်မှာ ပီအေပီ PAP ပါတီရဲ့ ပါလီမန်အမတ် (၁၉၈၈-၁၉၉၁) အဖြစ်က နေ အစိုးရဌာနများစွာမှာ ဝန်ကြီးဖြစ်လာပါတယ်။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး၊ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီး တာဝန်များယူပြီး နောက်ဆုံး ၂ဝဝ၄ -၂ဝ၁၁ မှာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စင်ကာပူကို ပထမဆုံးလာရောက်တဲ့ ၂ဝ၁၃ မှာ ဂျော့ခ်ျယိုးပဲတာဝန်ယူပြီး ဧည့်ခံပါတယ်။ စင်ကာပူ CID အဂတိတိုက်ဖြတ်ရေးများ၊ စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများကိုလိုက်လံပြသသူ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလောက မဝင်ရောက်ခင်က စင်ကာပူလေတပ်မတော်မှာ ဗိုလ်မှုချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလောက အနားယူပြီးနောက်ပိုင်း အကြီးတန်းအကြံပေးအဖြစ် Kuok Group, AIA Group တွေမှာ လုပ်ကိုင်ရင်း အခု Kerry Logistics Network မှာ ဥက္ကဌနဲ့ဒါရိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူ၊ ဟောင်ကောင် အခြေစိုက်ပြီး၊ အခု မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်းမှာ ဒါရိုက်တာဖြစ် ပါဝင်လာပါတယ်။ စင်ကာပူအစိုးရနဲ့ စီးပွားရေး သြဇာကြီးမားသူ ဖြစ်ပါတယ်။
● Serge Pun @ ဦးသိမ်းဝေ
(born 1953) SPA Group, Myanmar, Singapore, Hong Kong, Thailand, China ..etc. ယခင် ရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါး ပြန်လည်တင်ပြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကသူဌေးကြီးများဟာ ခြစားမှုစစ်အာဏာရှင်များနဲ့အတူလုပ်ကိုင်ရင်း ခရိုနီစီးပွားရေးစနစ်ကြီးတစ်ခုကို တည် ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ခရိုနီမဟုတ်ဘူး၊ လာဘ်မပေးဘူးလို့ပြောရဲတဲ့ မြန်မာပြည်ကသူဌေး ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါ သလဲ။ ဦးသိမ်းဝေဆိုသူကတော့ အဲဒီလိုပြောရဲတဲ့ လူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၂ နောက်ပိုင်း အိမ်ခြံမြေ Real Estate နဲ့ နိုင်ငံ ခြားကုမ္ပဏီများဝင်လာချိန်မှာ ငှားရမ်း၊ ရောင်းဝယ်ရင်း၊ အခုခေတ်စားနေတဲ့၊ Star City အိမ်ယာလုပ်ငန်းများနဲ့အတူ၊ ဦးသိမ်း ဝေရဲ့ SPA Group ဟာ ဝန်ထမ်း ၄ ထောင်ကျော်နဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာလာခဲ့ပါတယ်။ Forbes Asia , Sep 2013 စာအုပ်မျက်နှာ ဖုံးမှာ ဖေါ်ပြခံရပါတယ်။ သူတို့ SPA Group အဖွဲ့ရဲ့ Yoma ကုမ္ပဏီဟာ စင်ကာပူစတော့အိတ်ချိန်းမှာ တစ်ခုတည်းသော မြန်မာကုမ္ပဏီအဖြစ် စာရင်းဝင်ခွင့်ရထားပြီး ဦးသိမ်းဝေ Citizenship – Myanmar ကို စင်ကာပူက အချမ်းသာဆုံးလူ ၅ဝ စာရင်းမှာ အမှတ်စဉ် ၃၈ (US$ 500 million) အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဒါလောက်တောင် ခရိုနီမဟုတ်ကြောင်း၊ လာဘ်မပေးကြောင်းပြောရဲတဲ့ ဦးသိမ်းဝေဘဝအကြောင်း အနည်းငယ် ဆင်ချင် ကြည့်ချင်ပါတယ်။
ဦးသိမ်းဝေရဲ့ ဖခင်ဟာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ထောက်ခံသူ၊ လက်ဝဲသမားဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်မှာဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၃မှာ ဦးသိမ်းဝေ မြန်မာပြည်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၂ခုနှစ် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဦးနေဝင်း စစ်အာဏာသိမ်းပြီချိန်မှာ ဦးသိမ်းဝေ ငယ်စဉ်ကာလအချိန်၊ ဆယ်ကျော်အသက်အရွယ်ပါ။ ဖခင်ရဲ့ လုပ်ငန်းများ ပြည်သူပိုင်သိမ်းခံရပါတယ်။ ၁၉၆၅ မှာ ဖခင်နဲ့ မိသားစုအားလုံး မြန်မာပြည်ကအပြီးထွက်ခွာပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၊ ပီကင်းမြို့မှာ အခြေချခဲ့ပါတယ်။ ပီကင်းမြို့ Oversea Chinese School မှာ နိုင်ငံခြားသားအဖြစ် ကျောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်ရောက်ပြီး ၉ လအကြာ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန် ရေးကြီးဖြစ်ပြီး၊ ဦးသိမ်းဝေတို့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များ တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ၄ နှစ်အကြာ ဦးသိမ်းဝေတို့ကို နယ်စပ်လယ်ယာစခန်းကို ပို့လိုက်ပါတယ်။ လယ်သမားများနဲ့ အတူနေထိုင်၊ လုပ်ကိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၇၃ ခုနှစ် အသက် ၂ဝ အရွယ်မှာ တရုတ်ပြည်က ထွက်ခွာဖို့အခွင့်သာလို့ ဟောင်ကောင်ကို ရထား၊ မော်တော်ဘုတ်နဲ့ ရောက်ရှိပြီး အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေခဲ့ ပါတယ်။ ထွက်လာစဉ်က လက်ထဲမှာ HK$ 5.00 (ဟောင်ကောင်ငါးဒေါ်လာ) ပဲပါပြီး ခက်ခဲစွာ၊ ရုန်းကန်ရပါတယ်။ လေသန့် စက်များကို အိမ်များ၊ ကုမ္ပဏီများထံ အရောက်သွားပြီး လိုက်လံရောင်းချတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျာမန်လူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Elmer Busch ဆိုသူရဲ့ အိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီဆီကို လေသန့်စက်လာရောင်းချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်စကား၊ မပြောတတ်၊ ပြောတတ် Broken English နဲ့ ပြောပါတယ်။ Elmer Busch ကသဘောကျပြီး ဟောင်ကောင်အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းတွေမှ အလုပ်စတင်ခန့်ပါ တယ်။ ၁ဝနှစ်လောက် အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဟောင်ကောင်ကနေ ကနေဒါ၊ ဥရောပနိုင်ငံများအထိ စေ လွှတ်ပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်စေရင်း အမြင်ကျယ်လာပါတယ်။ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းကို ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဟောင်ကောင်တင်မကပါ။ တရုတ်ပြည်၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်းနိုင်ငံများမှာလည်း ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီများနဲ့ လုပ်ငန်းအောင်မြင်လာပါ တယ်။ နောင်တချိန်မှာ သူရဲ့ကုမ္ပဏီကြီးမှာပဲ သူရဲံ့ဆရာဖြစ်သူ ဂျာမန် Elmer Busch ကိုပြန်လည်ခေါ်ထားပြီး၊ Yoma Strategic’s property division ကနေဒါမှတဆင့် စီမံလုပ်ကိုင်စေပါတယ်။
မြန်မာပြည် ရှစ်လေးလုံးအရေးအခင်းအပြီး ဦးသိမ်းဝေ မြန်မာပြည်ကို ၁၉၉ဝ နောက်ပိုင်း ပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆိုရှယ်လစ် စီးပွားရေးစနစ်ကို ရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ပြန်လည်အခြေချလုပ်ကိုင်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။
အိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးများကိုလုပ်ကိုင်ရင်း၊ မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့် ထိုအချိန်က ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီမံဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဖြစ်နေသူ ဗိုလ်ချုပ်အေဘယ် General David Abel နဲ့ စတင်တွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမှုများ အထူးလိုအပ်နေချိန်မှာ ပြည်ပရင်းနှီးမှုများစွာ မြန်မာပြည်ကိုသယ်လာမဲ့ ဦးသိမ်းဝေရဲ့ကုမ္ပဏီကို ဗိုလ်ချုပ်အေဘယ်က အား ပေး၊ လုပ်ကိုင်စေပါတယ်။ ဖခင်သေဆုံးပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံဟာဝိုင်ရီမှာနေထိုင်တဲ့မိခင်ဖြစ်သူကို ၁၉၈၉ မှာ မြန်မာပြည်ပြန် ခေါ် အခြေချစေပါတယ်။ ရိုးမဘဏ်ကိုလည်း တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်က အစိုးရပိုင်ဟော်တယ်ကြီးတစ်ခုကို လွှဲ ပြောင်းရယူပြီး၊ ပုဂ္ဂလိကပြောင်းပြီးလုပ်ကိုင်ဖို့ အသေချာ၊ ပြင်ဆင်ပြီပါတယ်။ အစိုးရဝန်ကြီးအပြောင်းအလဲနဲ့ ဟိုတယ်ကို တခြားတယောက်က မိုးကျရွှေကိုယ် လုပ်ခွင့်ရသွားပါတယ်။ လာဘ်စားမှုမသင်္ကာဖြစ်မိတယ်လို့ ဦးသိမ်းဝေက ပြောပါတယ်။ အသေချာလုပ်ထားတဲ့ ဟိုတယ်စီးပွားရေး သူများလက်ထဲရောက်သွားတော့၊ စိတ်အလွန်ပျက်သွားပြီး၊ အဲဒီဟိုတယ်ရှေ့ကို ကားတောင် စီးမသွားဖြစ်တာ နှစ်အတော်ကြာပါတယ်။
ပထမဆုံးအောင်မြင်တဲ့ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းကတော့ လှိုင်သာယာ၊ ရန်ကုန်မြစ်တဖက်ကမ်းက FMI City အိမ်ယာများဖြစ်ပါ တယ်။ ဧက ၅ဝဝ လုံးခြင်းအိမ်ယာများကို ဆောက်လုပ်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယလုပ်ငန်း ဧက၆ဝဝ ပန်လှိုင်ဂေါက်ကွင်း၊ အိမ်ယာလဲ အောင်မြင်ပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၂၁ သန်း ပန်းလှိုင်ဆေးရုံနဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ရင်း ကြီးပွားလာခဲ့ပါ တယ်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ ဂေါက်သီးရိုက်ကစားကြတာကိုအကွက်မြင်တဲ့ ဦးသိမ်းဝေဟာ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အထူးဒီဇိုင်းလုပ်ပြီး တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်များလာရောက်ကစားကြတဲ့ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂေါက်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Forbes Interview မှာ ဦးသိမ်းဝေပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားအတိုင်း ပြန်ရေးရင် “No Generals can play free on my course, they have to pay”…။ ၁၉၉၇ အရှေ့တောင်အာရှစီးပွားကပ်နောက်ပိုင်းမှာ ဘဏ်လုပ်ငန်းအားလုံး အတုံးအရုံး ပျက်စီးရပါတယ်။ မြန်မာပြည်အကြီးဆုံး ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ကြီး ၂ ခု ကျဆုံးသွားပါတယ်။ ရိုးမဘဏ်ကိုတော့ လိုင်စင်ဆက်လက်ယူထားပေမဲ့ ငွေ စုဆောင်း/ချေးငှားခွင့် မရတော့ပါဘူ။
အခု မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ ခရိုနီစီးပွားရေးစနစ်ဟာ အဲဒီအချိန် ၁၉၉၇ ကတည်းကစတင်ခဲ့တယ်လို့ ဦးသိမ်းဝေက ပြောပါ တယ်။
● Mr. Clean နာမည်ကိုဂုဏ်ယူတဲ့ ဦးသိမ်းဝေ
Serge Pun လို့ လူသိများတဲ့၊ မြန်မာနာမည် ဦးသိမ်းဝေ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Mr. Clean ဆိုတဲ့နာမည် ရတဲ့အတွက် အလွန်ဂုဏ် ယူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အင်တာဗျူးမှာ He’s proudest of being called Burma’s Mr. Clean, the man who dared to say no to the grasping generals. “I’ve never paidacent. But I’ve never been short of opportunities “, “There is no difference between personal life and work life; it’s always the same thing.”, “We paidahigh price during the dark years, at the brink of elimination. We stood firmly to our principles.” လို့ပြောပါတယ်။ Forbes Asia မဂ္ဂဇင်းမှာ …He styles himself asaprincipled businessman who says no to corruption and isn’t afraid to make enemies. လို့ ရေးထားပါတယ်။
ရိုးမဘဏ်မှာလည်း အပြစ်မကင်းပါဘူး။ ဘဏ်ငွေများကို ထုတ်ယူခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်စဉ်က ငွေတွေကို မိမိတို့လုပ်ငန်းများမှာအသုံးချလိုက်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထု အပ်နှံငွေများကို မိမိရဲ့စည်းမျဉ်းကိုဖေါက်ဖျက်ပြီး လုပ်ရတာကို ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဘဏ် အားလုံး ဒီလိုလုပ်ခဲ့ကြတာပဲလို့ ပြောပါတယ်။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီး အပ်နှံငွေအားလုံးပြန်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ထိုစဉ်က မြန်မာအစိုးရဗဟိုဘဏ်ထံ ငွေအားလုံးကို ပြန်အပ်စေပါတယ်။ ပြင်ပလုပ်ငန်းရှင်များလဲ ချေးငွေအားလုံး ပြန်အပ် စေပါတယ်။ စီးပွားလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ခံရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းလုပ်ရပ်များက မြန်မာ့ဘဏ်၊ငွေကြေးလုပ်ငန်းများကို တချက်တည်းနဲ့ ရိုက်လှဲလိုက်သလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးလဲ ဆက်လက်နာလံ မထူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ၁ဝ နှစ်လောက် ကြံ့ကြံ့ခံလုပ်နိုင်တာလည်း ဦးသိမ်းဝေကို ပြည်ပက SPA Group များရဲ့ ထောက်ပံ့မှုများ ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတာဝန်ခံစစ်ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ဦးသိမ်းဝေတို့ ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေပါဘူး။ အဲဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မုန်းတီးမှုကို ခံရပါတယ်။ ၂ဝ၁၁ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရသစ်မှာ ဦးသိမ်းဝေတို့ စီပွားရေးအခြေအနေပြန်ကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်း၊ ဘိလပ်မြေစက်ရုံများ၊ လက်လီကုန်တိုက်များကို ရင်းနှီးမြှတ်နှံ တည်ဆောက်ပါတယ်။ ရိုးမဘဏ်လုပ်ငန်းကို အစိုးရကခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့ အဆိုပါ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦးလက်ထဲမှာ ဘဏ်လုပ်ငန်းအပြည့်အဝလုပ်ပိုင်ခွင့် လိုင်စင် ကြန့်ကြာနေပါတယ်။ အဲဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟာ အစိုးရသစ်မှာ ဒုသမ္မတဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်နှစ် လောက် ကြံ့ကြာပြီးမှာ ဒုသမ္မတအသစ်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန် စက်တင်ဘာ ၂ဝ၁၂ ကျမှ ရိုးမဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသွားပါတယ်။ ၁ဝနှစ်ကျော် ကြံ့ကြံ့ခံ ကြိုးစားမှုရဲ့ ရလဒ်၊ အသီးအပွင့် ခံစားရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ကလည်း ဈေးမဆမတန် တက်သွားတဲ့အတွက် SPA Group ပိုမိုချမ်းသာလာပါတယ်။ ရိုးမရဲ့ အဓိကဝင်ငွေများဟာ အိမ်ခြံမြေ၊ ရုံးခန်း များကို ရောင်းချရာမှ ရရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်သူဌေးကြီး ဂျော့ခ်ျဆိုးရိုးလည်း SPA, Yoma မှာ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုတ်နှံပြီး မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း တင်ဒါဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ရန်ကုန်မှာ ခေတ်နဲ့လျှော် ညီတဲ့ ရုံးခန်းလည်း အနည်းငယ်ပဲရှိပါတယ်။ ဦးသိမ်းဝေခန့်မှန်းချက်ကတော့ 430,000 sq feet ပဲရှိမယ်။ ဒါကြောင့် ရုံးခန်း ဈေးနှုန်းဟာ ဟောင်ကောင်ထက်ဈေးကြီးနေတာ မဆန်းပါဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ဟောင်ကောင်မှာနေရင်း ဟောင်ကောင်အမျိုးသမီးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပါတယ်။ ဟောင်ကောင်အခြေပြု၊ အိမ်ခြံမြေ၊စက်ရုံ၊ရှော့ပင်စင်တာများကို တရုတ်၊ထိုင်း၊မလေးရှား၊စင်ကာပူနိုင်ငံများကတဆင့် မြန်မာပြည်မှာ SPA Group အဖြစ်အောင်မြင်လာတဲ့ MR SERGE PUN @THEIM WAI, Executive Chairman ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းနဲ့ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း၊ သူတို့ရဲ့လစာငွေ အားလုံးကို ကုမ္ပဏီဝက်ဆိုဒ်မှာ ပွင့်လင်းစွာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ MR MELVYN PUN , MR CYRUS PUN သားနှစ်ဦးလည်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
၂ဝဝ၆ ခုနှစ်မှာ စင်ကာပူစတော့အိတ်ချိန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sea View Hotel Limited ကို ဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်။ နာမည် ကို Yoma Strategic Holdings Ltd လို့ပြောင်းပေးလိုက်ပြီး အဓိကလုပ်ငန်းအဖြစ် မြန်မာပြည်ရဲ့ property development, construction များကိုလုပ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ရိုးမဘဏ်လိုင်စင်ပြန်လည်ရရှိပြီးနောက်ပိုင်း ကုမ္ပဏီရှယ်ယာဈေး ၁ဝဆကျော် တက်လာပြီး ၂ဝဝ၃နိုဝင်ဘာလ Yahoo Stock အရ တန်ဘိုးဒေါ်လာ ၈၆၇သန်း ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်စီးပွားရေးမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိလာတာနဲ့အမျှ ဦးသိမ်းဝေတို့ FMI City, SPA Group နဲ့အလားတူ ကုမ္ပဏီများ မြန်မာပြည်ကို တဟုန်ထိုးဝင်ရောက်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၅ နောက်ပိုင်းကို စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ မြန်မာကုမ္ပဏီများ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံငွေလို အပ်ချိန် စင်ကာပူစတော့ဈေးကွက်မှာ ဦးသိမ်းဝေ နည်းအတိုင်း၊ ဝင်လာဖို့ နာမည်ကျော်သူဌေးကြီး ဦးဇော်ဇော် April 2012, RTO Reverse Takeover လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးဇော်ဇော်ရဲ့ မြန်မာပြည်ဓါတ်ဆီဆိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူစတော့ အိတ်ချိန်းက ငြင်းပယ်လိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ နာမည်ပျက်စာရင်းဝင်မှုကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။ စူပါမတ်ကက် City Mart Holding Co. Ltd, ရေအားလျှပ်စစ် Shwe Taung Group , Tun Thwin Mining Co Lt, Mandalay Capital, စတဲ့ ကုမ္ပဏီများလည်း စင်ကာပူစတော့အိတ်ချိန်းမှာပါဝင်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းရှာနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် လာဘ်စားမှုအနည်းဆုံး စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့၊ စတော့ပ်အိတ်ချိန်းပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားဟာ ဦးသိမ်းဝေ တစ်ဦးတည်းရှိပါသေးတယ်။ မြန်မာပြည် ကုမ္ပဏီကြီး ၂ဝခုလောက်က လက်ဝါးကြီးအုပ်စီးပွားလုပ်ကိုင်လျှက်ရှိပြီး အကြီးဆုံး အေရှားဝေါ၊ ဝန်ထမ်း၃သောင်းကျော် ရှိပါတယ်။ အသေးစား၊အလတ်စားများအတွက် ချေးငွေရဖို့ အလွန်ခက်ပါတယ်။ မြန်မာစတော့အိတ်ချိန်း ၂ဝ၁၅မှာ ဖွင့်နိုင်ဖို့ ဂျပန် Daiwa Securities Group နဲ့ မြန်မာအစိုးရကြိုးစားလျှက်ရှိပါတယ်။ မြန်မာကုမ္ပဏီရှယ်ယာများကို ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ရောင်းဝယ်နေကြပါတယ်။ လက်ရှိကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအတိုးတက်ဆုံး မွန်ဂိုလီယားသမ္မတအဖွဲ့၊ မြန်မာပြည်ကို အောက်တိုဘာ ၂ဝ၁၃က ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ မွန်ဂိုလီယားသမ္မတက အောင်မြင်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ လာဘ်စားမှုကိုတိုက်ဖျက်နိုင်ခြင်းနဲ့ စတင်ရကြောင်း၊ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ လာဘ်ပေး၊လဘ်ယူမှု အနည်းပါးဆုံးလို့ မိမိကိုယ်ကိုခံယူထားသူ၊ မပေးဘူးလို့ပြောရဲ၊ ပြောဝံ့တဲ့ Serge Pun (သို့မဟုတ်) ဦးသိမ်းဝေ ပြောတဲ့အတိုင်း မှန်ကန်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ သူလိုလူမျိုး မြန်မာ့စီးပွားရေးမှာရှိနေတာလဲ ဝမ်းသာ စရာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာလည်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ အတိုက်အခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့လို အဂတိကင်းသူ များပြားစွာပေါ်ထွက်လာမယ် မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောင်တစ်ချိန်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံကို အကျိုးပြုတဲ့ Andrew Carnegie (1835-1919), J D Rockefeller (1839–1937) သူဌေးကြီးလို စံပြသူဌေးများစွာလိုပါတယ်။ ဦးသိမ်းဝေ ကို မြန်မာပြည်ကိုအကျိုးပြုမဲ့ ခရိုနီမဟုတ်တဲ့သူဌေးကြီးအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်လိုပါတယ်။
“The Gospel of Wealth” called on the rich to use their wealth to improve society. Andrew Carnegie
ဦးသိမ်းဝေ အကြောင်း ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးဟောင်း ဒီမှာအဆုံးသပ်ပါမယ်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထူး စီးပွားရေး အဓိကအကျဆုံး စက်မှုဇုံများအလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးစက်မှုဇုံ ဆိုတာ နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုလို သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန် များကို မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရက ဝင်စွတ်ခွင့်မရှိပဲ ပြည်ပကနေ တင်သွင်းခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း လွတ်လပ်စွာလုပ်ခွင့်ရတဲ့ အထူး ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူနိုင်ငံ ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းကလဲ သွင်းကုန်၊ထုတ်ကုန် လွတ်လပ်ခွင့်များပေးထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပြီး၊ တရုတ်နိုင်ငံလည်း တနိုင်ငံလုံး တပြိုင်ထဲ တိုးတက်ဖို့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ အထူးစက်မှုဇုံများ လွတ်လပ်စွာ တည်ထောင် စေခြင်းက စတင်ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အထူးစက်မှုဇုံ (၃) ခု ရှိပါတယ်။ သီလဝါ (ရန်ကုန်တိုင်း)၊ ထားဝယ် (တနင်္သာရီ တိုင်း) နဲ့ ကျောက်ဖြူ (ရခိုင်ပြည်နယ်) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ နှောင့်နှေးနေခြင်းများကို အခု ၂ဝ၁၈ နှစ်ဆန်းမှာ ပြန်လည်စတင်နေကြ ပါပြီ။
● ထားဝယ် အထူးစက်မှုဇုံ
ရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့ ထားဝယ်စက်မှုဇုံ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုကိုလည်း ပြန်လည်စတင်ပါတော့မယ်။ လျှပ်စစ်နဲ့စွမ်းအင် ဒုဝန်ကြီး ဥက္ကဌ အဖြစ် ပြန်လည်စတင်ကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ လမ်းဖောက်လုပ်ဖို့ ချေးငွေလက်ခံတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ကြေငြာသွား ပါတယ်။ မြန်မာ - ဂျပန် - ထိုင်း (၃) နိုင်ငံ ပြန်လည်စတင်မဲ့အကြောင်း စိတ်ဝင်စားစရာ ကြေငြာပါတယ်။
● သီလဝါ အထူးစက်မှုဇုံ
ဂျပန် ဂျိုင်ကာ JICA ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သံလျှင်သီလဝါ စက်မှုဇုံကတော့ အခြေခံလျှပ်စစ်ဓါတ်အားစက်ရုံများ လည် ပတ်နေပြီဖြစ်ပြီး ပိုလျှံလျှပ်စစ်များကို ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရထံ ရောင်းချနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်အဖွဲ့ကပဲ ဂျပန်ကုမ္ပဏီများနဲ့ နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများကို အာမခံခေါ်ဆောင်တဲ့အတွက် ကုမ္ပဏီများစွာ လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အများစု ထုတ်ကုန်များ က မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်း သုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
● ကျောက်ဖြူ အထူးစက်မှုဇုံ
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ရွှေဓါတ်ငွေ နဲ့ ရေနံ ပိုက်လိုင်းများ စတင် အသုံးပြုနေပြီး၊ ကျောက်ဖြူဆိပ်ကမ်းအတွက် အထူးစက်မှုဇုံကို တရုတ်နိုင်ငံက ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
● JICA ဂျပန်အစိုးရ အေဂျင်စီ အကူအညီများစွာ
တကမ္ဘာလုံးကို ဂျိုင်ကာ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၈၄၅ ဦးရှိပြီး ၉၇ နိုင်ငံမှာ ရုံးဖွင့်ထားပါတယ်။ ၂ဝ၁၆ မှာ Grants(အကူအညီ) – Y98.0 billion, Technical Assistance(နည်းပညာအကူညီ) စုစုပေါင်း Y1791.5 billion = US$16.5 billion ပေးနေပါတယ်။ ဂျပန်အစိုးရ ODA Loan ကရယူပြီး၊ ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှုကိုတော့ ဂျပန်ကုမ္ပဏီများကို လိုက်ရှာဖွေ ရင်းနှီးမြှတ်နှံစေပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှအတွက် ၂ဝ၁၆ မှာ စုစုပေါင်း Y363.6 billion အသုံးပြုခဲ့တာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက အများဆုံး Y185.7 billion ရပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံက Y30.3 billion = အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၂၈ဝ ရရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ချေးငွေမှတ်တမ်း ၂ဝ၁၇ အရ စုစုပေါင်း ဂျပန်ချေးငွေ ကန်ဒေါ်လာ ၂.၃၁ ဘီလျံ နဲ့ ဒုတိယအများဆုံး ငွေချေးပေးတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။ JICA ဂျပန်အကူညီ အများဆုံးရတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံက ဗီယက်နမ်ဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်းငွေရဲ့ ၅၂.၂ရာခိုင်နှုန်းကို ဗီယက်နမ် ရရှိထားပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံများပြီးရင် စတ္တုထ အများဆုံး ၈.၇ရာခိုင်နှုန်း ပဲရတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်ကို မမှီနိုင်သေးပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ၂ဝ၁၇ နောက်ပိုင်းမှာ ဂျပန်နိုင်ငံက ချေးငွေ ပိုပြီးများပြားစွာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်လာပါတယ်။ မြန်မာတနိုင်ငံလုံး လမ်း-တံတား လုပ်ငန်းများကို ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေ အုပ်စီးသွားပြီလို့မြန်မာခရိုနီ ကုမ္ပဏီများက ညည်းညူကြပါတယ်။ မြန်မာခရိုနီကုမ္ပဏီများနဲ့ နိုင်ငံခြား (တရုတ်) ဖက်စပ်လုပ်တာထက်စာရင် ဂျပန် ကုမ္ပဏီများလုပ်တာက ဈေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရည်အသွေး စိတ်ချရပါတယ်။ JICA စီမံကိန်းတွေ အတူလုပ်ရင်း မြန်မာအင်ဂျင်နီယာ၊ စာရင်းစစ်များကို သင်တန်းများစွာ လက်တွေ့သင်ယူကြရပါမယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို အစိုးရကဦးဆောင်လုပ်မှ ဖြစ်ပါမယ်။ အစိုးရက စီးပွားလုပ်တတ်တဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ ကင်းရှင်းတဲ့ မြန်မာစီးပွားရေးတိုင်ကွန်း Serge Pun @ ဦးသိမ်းဝေ နဲ့ စင်ကာပူကုမ္ပဏီများ ပါဝင်လာဖို့ စင်ကာပူ အစိုးရ ဝန်ကြီးဟောင်း ဂျော့ ခ်ျယိုး George Yeo တို့ပါဝင်တဲ့ “ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ” တည်ထောင်ခြင်း ကို ဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုပါတယ်။ သူတို့စီမံခန့်ခွဲတဲ့ ကုမ္ပဏီ ရဲ့ ကန်ထရိုက်များကို တင်ဒါခေါ်တဲ့အခါ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာက ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ လမ်း၊ တံတားများ တင်ဒါနဲ့ များစွာ ခြားနားတဲ့အပြင် အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းမှာလဲ နိုင်ငံတကာအဆင့်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာလူငယ် ပေါင်း အမြောက်အများ အလုပ်အကိုင်များရရှိပြီး လေ့လာ၊သင်ကြား၊ အလုပ်လုပ်ရင်း တိုးတက်ကြီးပွားလာကြပါမယ်။ ကုမ္ပ ဏီငယ်များစွာ မကြာခင် ကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာလာပြီး၊ ကန်ထရိုက်ရတဲ့ ကုမ္ပဏီများမှာလည်း လူငယ်ပညာရှင်များစွာ လစာ ကောင်းကောင်း ရရှိ တိုးတက်ကြီးပွားလာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်းအတွက် ရန်ကုန်တဖက်ကမ်း ဒလဖက်ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ကမ္ဘာနိုင်ငံ မြို့ကြီးများ တိုးချဲ့မှု ရလဒ်များအရ မြစ်တဖက်ကမ်း ဒေသများကို လူများနေထိုင်ဖို့ သဘောမကျပါ။ စီးပွားရေးမြို့သစ်ဖြစ်လာဖို့ ရန်ကုန်မြို့သစ် Phase-1 ကတော့ အောင်မြင်မှာပါ။ Phase2ဒလဖက်ကမ်းကတော့ အောင်မြင်ဖို့မလွယ်ပါ။ ရန်ကုန်-မန္တ လေး-ပြည် ဖက်ကိုသွားတဲ့ လမ်းမတွေ ရှိတဲ့နေရာပဲ စီးပွားရေးတိုးတက်လာပြီး၊ ဒလဖက်ပိုင်းကတော့ ဂိုထောင်များနဲ့လယ်ယာသားငါးလုပ်ငန်းများအတွက်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
စနစ်ကောင်းတစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ကြောင့် ဆိုတာ တရုတ် တိန်ရှောက်ဖိန်၊ အမေရိကန် ဂျော့ဝါရှင်တန်၊ စင်ကာပူ လီကွမ်းယူ စတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ “ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ” အောင်မြင်ဖို့ ဝန်ရံရပါမယ်။
လူကောင်းသူကောင်းများစွာ ပါဝင်လာခြင်းက အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ မျက်နှာကြောင့် ဆိုတာ ငြင်းမရပါဘူး။ လူတော်လူကောင်း ခေါင်းဆောင်များစွာ ပျိုးထောင်ပေးရင် ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုများစွာ ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ ပူးပေါင်းကူညီမှုက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
မကြာခင်မှာပဲ စံပြ ဒီစံပြ “ရန်ကုန်မြို့သစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ” ကပဲ မှန်ကန်တဲ့ စာရင်းစစ်စနစ်၊ တရားမျှတတဲ့အမြတ်ငွေနဲ့ အတူ နိုင်ငံတော်ကို အခွန်ပေးခြင်းတွေမှာ စံပြဖြစ်စေဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
၁ ဧပြီ၊ ၂ဝ၁၇